အစာအိမျအောငျ့ခွငျး နှငျ့ ရှောငျသငျ့ ဆောငျသငျ့သညျမြား | OnDoctor
အစာအိမျအောငျ့ခွငျး နှငျ့ ရှောငျသငျ့ ဆောငျသငျ့သညျမြား
By Win Win May	 On Jun 20, 2018 Last updated Jun 20, 2018
အစာအိမ်အောင့်ခြင်း နှင့် ရှောင်သင့် ဆောင်သင့်သည်များ
အစာအိမ်အောင့်ခြင်းက အဖြစ်များသော အတွေ့ရများသော ရောဂါပါ။ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားသောက်သော အစားအစာများကို အစာအိမ်က ချေဖျက်ပေးပါတယ်။ အစာအိမ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကတော့အများကြီးပါ။ အစာအိမ်ရောင်တာ၊ အစာအိမ်အနာဖြစ်တာ၊ အစာအိမ်မှာအလုံးဖြစ်တာ၊ အစာအိမ်ကင်ဆာ အစာအိမ်အောင့်တာ စသဖြင့် အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အဲဒီလူနာတွေများပါတယ် ။ ဘာတွေရှောင်သင့်လဲ? ဟုတ်ပါတယ် ရှောင်ရတာတွေ များပါတယ် အဲဒါတွေမရှောင်ရင် လျော့မစားရင် ခဏခဏ ပြန်အောင့်တတ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဆေးလိပ် အရက် ကို ရှောင်ရပါမယ်။
လက်ရှိ အောင့်နေရင် ပိုပြီးရှောင်သင့်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကတော့ အပူ အစပ် အချဉ် လက်သုပ်စာတွေ အပြင် ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည် ပါရှောင်ရပါတယ် ။ အစာကို ပျော့ပျော့ နဲ့ နဲနဲ စီပဲ စားသင့်ပါတယ် နဲနဲနဲ့ အကြိမ်အရေ အတွက် များများ စားရပါတယ်။ အစာမခံ သင့်ပါဘူး ။ အထူးသဖြင့် stress များသူတွေ အလုပ်များသူတွေပိုပြီး ဂရုစိုက်ရပါတယ် ။
အစာကို အချိန်မှန်မှန်စားခြင်း၊ အစာကိုကြေညက်စွာဝါးစားခြင်းတို့သည် သင်၏ အစာအိမ်ကျန်းမာရေး ကို များစွာအထောက်အကူဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်တဲ့အသီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ပိုစားပါ။ အစာကိုအချိန်မှန်စားပါ။ အမျိုးအစား မှန်စားပါ။ တစ်ခါစား မများစေရပါ။ အရက် မသောက်သင့်ပါ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ စိတ်ဖိအား လျှော့ဖို့လိုသူက လျှော့ချပါ။ အစာပျော့ပျော့စားပါ။ စားပြီးလမ်းလျှောက်ပေးပါ။ အပူအစပ်များမစားပါနဲ့။ ရေများများ သောက်ပါ။ အစာစားတဲ့အခါ အဆီနည်းပါစေ၊ အဝကြီးတစ်ခါတည်းမစားပါနဲ့။
O သွေး အမျိုးအစား ရှိသူတွေ ဟာလည်း အစာအိမ်အောင့် တာသူများတွေထက်ပိုဖြစ်တတ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါတွေ မရှောင်ရင် ခဏ ခဏ ဖြစ်မယ် ၊ ကြာလာရင် အစာအိမ် မှာ အနာပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ သွေးထွက်တာ အစာအိမ် ပေါက်တာတွေပါဖြစ်လာရင်တော့ အရမ်းဆိုးသွားပါပြီ။ နောက်တစ်ခု ကတော့ အစာအိမ်မှာ H.pylori ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုး ရှိနေရင်လည်း မကြာခဏ အစာအိမ်အောင့် တတ်ပါတယ် ။ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုကို အချိန်ပြည့်တဲ့ အထိ တိတိကျကျ ကုသမှုခံယူရပါတယ်။
အစာအိမျအောငျ့ခွငျးက အဖွဈမြားသော အတှရေ့မြားသော ရောဂါပါ။ ကြှနျတျောတို့နစေ့ဉျစားသောကျသော အစားအစာမြားကို အစာအိမျက ခဖြေကျြပေးပါတယျ။ အစာအိမျမှာဖွဈနိုငျတဲ့ ရောဂါတှကေတော့အမြားကွီးပါ။ အစာအိမျရောငျတာ၊ အစာအိမျအနာဖွဈတာ၊ အစာအိမျမှာအလုံးဖွဈတာ၊ အစာအိမျကငျဆာ အစာအိမျအောငျ့တာ စသဖွငျ့ အမြားကွီးဖွဈနိုငျပါတယျ။
ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာလညျး အဲဒီလူနာတှမြေားပါတယျ ။ ဘာတှရှေောငျသငျ့လဲ? ဟုတျပါတယျ ရှောငျရတာတှေ မြားပါတယျ အဲဒါတှမေရှောငျရငျ လြော့မစားရငျ ခဏခဏ ပွနျအောငျ့တတျပါတယျ။ အဓိကကတော့ ဆေးလိပျ အရကျ ကို ရှောငျရပါမယျ။
လကျရှိ အောငျ့နရေငျ ပိုပွီးရှောငျသငျ့ပါတယျ။ အစားအသောကျကတော့ အပူ အစပျ အခဉျြ လကျသုပျစာတှေ အပွငျ ကျောဖီ လကျဖကျရညျ ပါရှောငျရပါတယျ ။ အစာကို ပြော့ပြော့ နဲ့ နဲနဲ စီပဲ စားသငျ့ပါတယျ နဲနဲနဲ့ အကွိမျအရေ အတှကျ မြားမြား စားရပါတယျ။ အစာမခံ သငျ့ပါဘူး ။ အထူးသဖွငျ့ stress မြားသူတှေ အလုပျမြားသူတှပေိုပွီး ဂရုစိုကျရပါတယျ ။
အစာကို အခြိနျမှနျမှနျစားခွငျး၊ အစာကိုကွညေကျစှာဝါးစားခွငျးတို့သညျ သငျ၏ အစာအိမျကနျြးမာရေး ကို မြားစှာအထောကျအကူဖွဈသညျ။ လတျဆတျတဲ့အသီးတှေ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို ပိုစားပါ။ အစာကိုအခြိနျမှနျစားပါ။ အမြိုးအစား မှနျစားပါ။ တဈခါစား မမြားစရေပါ။ အရကျ မသောကျသငျ့ပါ။ ဆေးလိပျဖွတျပါ။ စိတျဖိအား လြှော့ဖို့လိုသူက လြှော့ခပြါ။ အစာပြော့ပြော့စားပါ။ စားပွီးလမျးလြှောကျပေးပါ။ အပူအစပျမြားမစားပါနဲ့။ ရမြေားမြား သောကျပါ။ အစာစားတဲ့အခါ အဆီနညျးပါစေ၊ အဝကွီးတဈခါတညျးမစားပါနဲ့။
O သှေး အမြိုးအစား ရှိသူတှေ ဟာလညျး အစာအိမျအောငျ့ တာသူမြားတှထေကျပိုဖွဈတတျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါတှေ မရှောငျရငျ ခဏ ခဏ ဖွဈမယျ ၊ ကွာလာရငျ အစာအိမျ မှာ အနာပါဖွဈလာနိုငျပါတယျ ။ သှေးထှကျတာ အစာအိမျ ပေါကျတာတှပေါဖွဈလာရငျတော့ အရမျးဆိုးသှားပါပွီ။ နောကျတဈခု ကတော့ အစာအိမျမှာ H.pylori ဆိုတဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုး ရှိနရေငျလညျး မကွာခဏ အစာအိမျအောငျ့ တတျပါတယျ ။ လိုအပျတဲ့ ကုသမှုကို အခြိနျပွညျ့တဲ့ အထိ တိတိကကြ ကုသမှုခံယူရပါတယျ။
အသညျးရောငျ အသားဝါ ဘီ နှငျ့ အီး